Fil d'actualités du 22/10/2018
22/10/2018 - 10:00 : MARC RAVALOMANANA : "Izaho Marc Ravalomanana dia mandray lesona avy amin'ny tantaraiko sy ny lasa fony aho nitondra ny firenena no sady hampihatra ihany koa ny foto-kevitra nijoroan'i Profesora Zafy Albert, izay nametraka lova ho an'ny firenena toa an'i Nelson Mandela, raha ny filozofiany momba ny fampihavam-pirenena sy ny Fanorenana ifoton'ny Repoblika no resahina".
22/10/2018 - 09:00 : MARC RAVALOMANANA : Nanao fanambarana nampahafantatra ny antsoina hoe hevitra mifehy niampy fampahafantarana ireo tompon'andraikitra miara-miasa akaiky aminy amin'ny Fampielezan-kevitra i Marc Ravalomanana androany maraina.
20/10/2018 - 11:00 : MARC RAVALOMANANA : Ho avy eny amin'ny Kianjan'Ambohijatovo hihaona amin'ny vahoaka izy anio 20 septambra. Hangorom-potsy ny tanana.
20/10/2018 - 10:00 : FIANGONANA FJKM: Tokanana anio 20 oktobra ny Kolejy Teolojika eny Ivato, izay tsangambaton'ny jobily faha-50 taona.
20/10/2018 - 09:30 : BAREAN'I MADAGASIKARA : Nanapa-kevitra ny federasiona fa tsy milalao amin'ny CAN i Faneva Ima sy Lalaina Nomenjanahary na Bolida. Ny antony hono dia hoe mahay vava loatra izy ireo, izay sahy mamaky bantsilana ny marina ka izay no tsy zakany ny lohandohan'ny mpisorona ao amin'ny Federasiona.
20/10/2018 - 08:15 : FIFANARAHANA POLITIKA NOSONIAVIN'NY KANDIDA 17 ISA: Sokafana ny lisi-pifidianana mba hahafahana manadio sy manafoana ny lesoka misy, ka anjaran'ny CENI ampian'ny solontenan'ireo kandida no miantoka ny fanatanterahana izany sy vokatra araky ny lalàna aterak'izany.
19/10/2018 - 14:00 : LALAO RAVALOMANANA: Nitohy teto aminy tany menabe teto Akorondrano Boriborintany faha-3 ny fampielezan-kevitra nataony Neny Lalao Ravalomanana androany maraina hoenti-mandresy lahatra ny vahoaka hifidy an'i Marc Ravalomanana.
19/10/2018 - 13:30 : FIKAMBANANA SAMARITANA: Hanohana sy hampandany an'i Marc Ravalomanana ny Fikambanana Samaritana, tarihin'ny Pasitera Roger Randriamisata.
19/10/2018 - 13:00 : FIHAONAN'NY KANDIDA FILOHA SY NY CENI: Handray anajra amin’io fifanatrehana amin'ny kandida ny avy amin'ireo andripan-jakana na rafitra voakasika toy ny Fitsarana Avo momba ny Lalam-panorenana na ny Samifin. Nasaina hanatrika an’io fotoana io koa ireo tomponandraikitra mahefa ao amin’ny governemanta manana andraikitra amin’ny fanomanana ity fifidianana.
19/10/2018 - 12:30 : FISAMBORANA AN'I PETY RAKOTONIAINA: Tsy ara-drariny sy tsy ara-dalàna ny fisamborana sy fampidirana am-ponja raha ny fanehoan-kevitr'i ny Mpisolovava Willy Razafinjatovo na Olala.